ScreenPainter: manao sary rehefa naka ny efijery (Cydia) | Vaovao IPhone
ScreenPainter: manao sary rehefa naka ny efijery (Cydia)
Tato ho ato dia maro ny fikafana mifandraika amin'ny pikantsary sy ny fiasa fanampiny samihafa no miseho. Ohatra, ny iray andro lasa izay dia nilaza taminay izahay momba ny fanitsiana izay nahafahanay nanao hetsika hafa raha vao nanindry ny bokotra izahay hisamborana ny efijery, toy ny: fitehirizana azy amin'ny rool, kopia azy amin'ny tabilao, fizarana izany amin'ireo tambajotra sosialy. .. Androany dia miresaka momba ny ScreenPainter isika, tweak iray ahafahantsika mandoko ny pikantsary vantany vao vitantsika izany, aorian'ny fitsambikinana dia mamakafaka ity sioka maimaimpoana ity tanteraka isika.
Manaova sary amin'ny pikantsary amin'ny ScreenPainter
Mba hanazavana ny fomba fiasan'ny ScreenPainter dia mila apetraka ao amin'ny fitaovantsika ilay tweak. Azontsika atao ny mahita azy io maimaimpoana amin'ny repo ofisialy BigBoss. Miverina indray izahay ary efa napetraka ao amin'ny fitaovantsika ilay tweak, vonona ny hanao sary an-tanana ao amin'ny pikantsarinay.
Mandehana voalohany amin'ny iOS Settings izahay ary hitantsika fa manana ScreenPainter maromaro Fikirana azontsika atao ny manova izay tiantsika:
Fikirana borosy: Eto isika dia afaka mamorona mombamomba ny borosy isan-karazany, izany hoe isaky ny fisamborana dia tsy misy afa-tsy loko iray ihany no ahafahantsika manoritra ary amin'ity fizarana ity dia azontsika atao ny manova ny loko tiantsika handokoana ny fisamborana.
Alefaso ny loko tselatra: Rehefa mandray pikantsary isika dia azo ampihodina na hofoanana miaraka amin'ny ScreenPainter ny vokarin'ny flash ankoatry ny fanovana ny lokony avy eo amin'ny toerana «Flash Colour».
Mba hijerena ny fandidiana rehefa avy nanova ny toe-javatra araka izay tadiavinay izahay dia maka pikantsary ary mijery ny fomba handokoana ny sary. Amin'ny farany dia tsindrio ny bokotra Home ary aseho ny varavarankely misy safidy maromaro:
Tehirizo amin'ny rakitsary
Adikao amin'ny solaitrabe
Samy (kopia ary tahirizo)
Tohizo ny sary
Tehirizo + Tohizo ny sary
Kopia + Tohizo ny sary
Ny roa teo aloha (kopia ary tahirizo) + manohy manoritra sary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » ScreenPainter: manao sary rehefa naka ny efijery (Cydia)
Ny ringtone an'ny iPhone, kintan'ny remix [video]